News 18 Nepal || पारस बन्लान् त आईसीसी एसोसिएट प्लेयर अफ दी डिकेड ?
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका छन् । पारस आईसीसीको एसोसिएट राष्ट्र तर्फ दशककै उत्कृष्ट किक्रेट खेलाडीहरुको मनोनयनमा परेका हुन् ।
आईसीसीले निकालेको एसोसिएट राष्ट्रतर्फको ’आईसीसी पुरुष एसोसिएट प्लेयर अफ द डिकेड’ अन्तर्गत ६ जनाको अन्तिम सूचिमा पारस परेका हुन् । उनीसँगै स्कटल्यान्डका ३ जना, पपुवा न्यू गिनीका एक र नेदरल्यान्ड्सका एक जना खेलाडी मनोनयनमा परेका छन् ।
आईसीसीले उत्कृष्ट खेलाडीको घोषणा भने आगामी डिसम्बेर १८ तारिखमा गर्नेछ । उत्कृष्ट खेलाडी भोटिङ मार्फत हुनेछ । पारस नेपाली क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सफल कप्तान मानिन्छन् ।
पारसले सन् २००९ मा विनोद दासलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली टोलीको कप्तानी समहालेका थिए । उनले राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट २०७६ साल असोज २८ गते राजिनामा दिएका थिए ।
यो अवार्ड हात पार्न पारसले स्कटल्यान्डका कायल कोएट्जर, क्यालम म्याकलियोड र रिकी बेरिङ्टन, पपुआन्युगिनीका असाद भाला र नेदरल्यान्ड्सका पिटर बोरेनलाई पछाडि पार्नुपर्ने छ । विजेताको टुंगो भोटिङबाट हुने आईसीसीले जानकारी दिएको छ । भोटिङ खुला भइसकेको छ ।
आईपीएल २०२१ : कुन टिमबाट को को भए रिलिज ?
आईपीएल २०२१ : मुम्बई इन्डियन्सद्वारा लसिथ मलिंगा रिलिज
भारतले जित्यो टेस्ट श्रृंखला, पन्तले बनाए नयाँ रेकर्ड
होबार्टले सिड्नी थन्डरलाई हरायो, सन्दीप फेरि विकेट विहिन
मोहम्मद सिराजले अष्ट्रेलियाविरुद्दको सिरिजमा बनाए नयाँ रेकर्ड
यसरी हुँदैछ आइपीएल अक्सन, कुन टिमलाई कति फाइदा कति घाटा ?